IATA: US kuvhurazve kune vafambi vafambi inhau dzakanaka
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » USA Kuputsa Nhau » IATA: US kuvhurazve kune vafambi vafambi inhau dzakanaka
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • Health News • Hospitality Industry • nhau • vanhu • Kuvakazve • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • USA Kuputsa Nhau
Sarudzo yakaitwa neBiden Administration yekugonesa vafambi vakabaiwa majekiseni kuti vapinde muUS nemhedzisiro yakaipa yeCOVID-19 vasati vafamba kubva kutanga kwaNovember inotambirwa neIATA.
Kubvumira kupinda kuUS kune avo vakabaiwa kunovhura kufamba kuenda kuUS kune vazhinji vakavharirwa kwemwedzi gumi nesere yapfuura.
Ichi chiziviso chinoratidza shanduko yakakosha mukugadzirisa njodzi dzeCOVID-19 kubva pakufungidzirwa kwegumbeze padanho renyika kuongorora njodzi yemunhu.
The International Mhepo Yekufambisa Sangano (IATA) akagamuchira danho rakatorwa neBiden Administration yekugonesa vafambi vakabaiwa majekiseni ekupinda muUS nemhedzisiro yakaipa yeCOVID-19 vasati vafamba kubva kutanga kwaNovember.
Zvakakosha, izvi zvinotora zvinonzi zvinonzi 212f zvinorambidza zvaitadzisa chero munhu kupinda muUS dai anga ari mune makumi matatu nematatu nyika dzinosanganisira UK, Ireland, nyika dzese dzeSchengen, Brazil, South Africa, India, neChina mukati memazuva gumi nemana apfuura.
“Chiziviso chanhasi idanho guru mberi. Kubvumira kupinda kuUS kune avo vakabaiwa kunovhurwa kuenda kuUS kune vazhinji vakavharirwa kwemwedzi gumi nemasere yapfuura. Idzi inhau dzakanaka kumhuri uye vadikani vakatambura kuburikidza neshungu dzemwoyo uye kusurukirwa kwekuparadzaniswa. Izvo zvakanaka kumamirioni ehupenyu muUS zvinoenderana nekushanya kwepasirese. "Izvi zvichasimudzira kusimudzira hupfumi nekugonesa misika yekufambisa," akadaro Willie Walsh, Iată'' Director General.
“Ichi chiziviso chinoratidza shanduko yakakosha mukugadzirisa njodzi dze COVID-19 kubva pakufungidzirwa kwegumbeze padanho renyika kuenda pakuongorora njodzi yemunhu. Dambudziko rinotevera ndere kutsvaga hurongwa hwekugadzirisa njodzi kune vafambi vasina mukana wekubaiwa majekiseni. Dhata inonongedza kuyedzwa semhinduro. Asi zvakakoshawo kuti hurumende dzikurumidze kuburitsa majekiseni epasi rose uye vabvumirane hwaro hwepasirese hwekufamba uko zviwanikwa zvekuyedza zvinotariswa kune vafambi vasina kubayiwa. Tinofanira kudzokera kumamiriro ekuti rusununguko rwekufamba rwunowanikwa kune vese, ”akadaro Walsh.